Shiinaha 3D FRP Sandwich Panel-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Beihai Fiberglass
Waa geedi socod cusub, wuxuu soo saari karaa awood sare iyo cufnaan guddi isku-dhafan oo isku mid ah.
Ku dhaji saxanka PU-ga dusha 3 d khaaska ah, iyada oo loo marayo RTM (habka moobiika vacuum).
3D FRP guddi xumbo guddi xardhay waa geedi socod cusub Nidaamka cusub wuxuu soo saari karaa xoog sare iyo cufnaanta guddi isku dhafan oo isku mid ah. Ku dhaji saxanka PU-ga dusha 3 d khaaska ah, iyada oo loo marayo RTM (habka moobiika vacuum).
Ly Dhar buuxa
Face Wajiga gudigu aad buu u qurux badan yahay,
Strength Awood sare.
● Hal mar dhammeystir, hoos u dhig dhibaatada xumbada sanduuqa dhaqanka.
Hadday ku samaysan tahay maro 3D caadi ah ka dibna ay ka buuxsameyso PU xumbo, xumbadu iskumid ma noqonayso, cufkuna ma noqon doono mid is waafaqsan. Awoodda guddiga waxay noqon doontaa mid aad u hooseeya.
Ballaca ugu ballaadhan waa 1500mm, waxaad dooran kartaa xumbada kala duwan, sida PU, PVC iyo wixii la mid ah. Awoodda xumbada PVC waxay ka sarreysaa PU, sicirka sidoo kale wuu ka sarreeyaa. Xumbada PU ee ugu khafiifsan waa 5mm, xumbo PVC ugu khafiifsan waa 3mm cabbirka caadiga ah waa 1200x2400mm, guddiga caadiga ah waxay doortaan xumbada PU (cufnaanta 40kg / m3) + labada dhinac ee isku-darka isku-dhafan ama gogol-xirmo, wadarta guud ayaa ah 20mm.
Faa'iidooyinka RTM Maxaa kuu keenaya
Dusha sare ee badeecada ayaa si buuxda loo qeexi doonaa inta lagu jiro cadaadiska Qiimaha dhammeystirka hooseeya iyo tayada quruxda badan
Xorriyadda caaryada ee ballaaran iyo mugga mugga leh (illaa 60%) Guryaha makaanikada Ultimate
Dib-u-dhiska joogtada ah Heerka ka-tagida ardayda oo ku habboon barnaamijyada horumarsan
Warshadaynta hal abuurka ah ee joogtada ah Kaydinta kharashka, awoodda qalabka sare
Farsamada caaryada xiran Si dhif ah qiiqa kasta iyo qiiqa u shaqeeya
Hore: 3D Gudaha
Xiga: 3D FRP Panel oo leh cusbi